Shirweynihii Istanbul ee looga hadlay Arrimaha Bani’aadamnimada oo la soo Gaba-gabeeyay (SAWIRRO) | Sagal Radio Services
Ujeeddada Shirkaan ayaa ahayd sidii wax looga badali lahaa nidaamka wax looga qabto dhibaatooyinka bini'aadaminimo ee ka dhasha khilaafyada iyo dagaalada, masiibooyinka dabiiciga ah iyo isbadalka cimilada.
Waxaa la sheegay in lagu Guul-darreystay ilaalinta Sharciga Caalamiga ah ee Arrimaha bini'aadaminimada.
Xoghayaha guud ee QM, ayaa ugu baaqay dowladaha Dunida, ganacsiyada iyo hay'adaha gargaarku in ay go'aansadaan in kala bar ay noqdaan tirada dadka guryahooda ka barakacay marka la gaaro sanadka 2030.
Wuxuu yiri si siman in loo qaybsado ayaan filaynaa. Hadda kadib waa in cid walba ay mas'uuliyad iska saartaa.
Tags IStanbuul Shirkii